The Guardian: 46 Askari Ayaa Dowladda Uganda Looga Dilay Weerarkii Buula-Mareer. – Bogga Calamada.com
“Waxay ahayd xilli saacadu ku beegneyd 09:00am markii qaraxa ugu horeeyey lala helay saldhigga, wuxuuna ahaa gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kadibna dagaal xooggan ayaa ka qarxay goobta” ayuu yiri Cali Maxamed oo ah qof Beeraley oo Telephone-ka ugu waramay wargeyska.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ” Waxaan arkay uuro fara badan oo ka soo baxeysa gudaha saldhigga” Wuxuu tilmaamay in daqiiqado ka dib la maqlay jugta qaraxii labaad oo lala eegtay ciidamo ku sugnaa Golweyn kuwaas oo gurmad u soo sameyn lahaa saaxiibadooda weerarku ku qabsaday Buula-Mareer.
“Inta badan askarta la laayey waxay ahaayeen saaxiibadeena, si wadajir ah ayaan u wada qeybsan jirnay cuntada iyo cabitaanka marka aan joogno xeradooda” sidaas waxaa Guardian u sheegay Abdi Nuur oo ah Korneel ka tirsan maleeshiyaatka Soomaalida ee la howlgala ciidamada Uganda “Waan isku daynay inaan caawino saaxiibadeena Uganda laakiin waxaa sidoo kale jiray weerar lagu soo qaaday saldhigeena” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka Dowladda Federaalka ugu magacaaban Sh/hoose ayaa isna wargeyska Ingiriiska laga leeyahay ee The Guardian u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay weerareen ugu yaraan afar saldhig oo kale oo ciidamadoodu ay ku leeyihiin hareeraha degmada Buula-Mareer. “Khasaaruhu wuu ka badnaan karaa inta aan anaga ku qiimeynay, kuwani waxay ahaayeen weeraro abaabulan oo isku xiran” ayuu yiri.